सफलतापूर्वक ब्लग चलाउनको लागि Semalt सल्लाहहरू
कुनै पनि ई-कमर्स प्लेटफर्मको लागि, तपाईंको ग्राहकसँग स्थिर संवाद राख्नु काम अभ्यासमा एक मुख्य तत्व हो। ब्लगहरु तपाइँको ग्राहकहरु संग एक मजबूत संपर्क स्थापित गर्दछ। यसैले, हाम्रो वेबसाइटमा एक ब्लग थपेको सबैभन्दा प्रभावी स्थानीय एसईओ तकनीक हो।
Semalt डिजिटल सेवाहरुका विशेषज्ञ, फ्रान्क Abagnale ब्लग लाई ग्राहकहरु संग संचार विस्तार गर्न को उपकरण को रूप मा प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण पक्षहरु लाई व्याख्या गर्दछ।
तपाईलाई के जान्नु आवश्यक छ
कुनै पनि इन्टरनेट साइटको लागि, ब्लग थप्नु भनेको केवल एक प्लेटफर्म हुनु भनेको जहाँ कसैले पोष्ट गर्न सक्दछ र नयाँ प्रासंगिक सामग्री। प्राय: स्वचालित सामग्री प्रबन्धन प्रणालीहरूमा, त्यहाँ सामान्यतया "ब्लग" सेक्सन हुन्छ। अन्य विकासकर्ताहरूको लागि, ब्लग कोडिंग सजिलो कार्य हुन सक्छ, असंख्य नि: शुल्क टेम्पलेट्स र CSS ड्रप-डाउनहरूलाई धन्यवाद। भिन्नता सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा हो जुन एक ब्लगको लागि प्रयोग गरीरहेको छ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि, ब्लग थप्नाले प्रत्यक्ष रूपमा बटनको क्लिक समावेश गर्दछ। तपाईंको आला को लागी परम्परागत ब्लगिंग विचारहरु:
अनुभव को एक प्रशंसापत्र
तपाईंको वेबसाइट सम्बन्धित समाचार आइटम
विशेष सेवा, विभाग वा समारोह
तपाईंको ब्लगमा टेक्निकल मुद्दाहरूको बारेमा धेरै आपत्ति छैन।
वेबसाइटमा ब्लग समावेश गर्ने बित्तिकै सबै प्रकारका प्रश्नहरू हुन सक्छन्। उदाहरण को लागी, एक को लागी ROI आश्चर्य लाग्न सक्छ, रखरखाव को लागत, पोष्ट गर्न सामग्री, कसरी एक वेबसाइट मा ब्लग जोड्ने, फ्रीलांसर र डेवलपर्स र एक ब्लग को स्वचालन सुविधाहरु भाँडा। यी महत्त्वपूर्ण विचारहरू हुन्, तर तिनीहरूले तपाईंको धेरै समय लिनुहुँदैन।
ब्लग बनाउने विचारमा प्रारम्भिक चरणमा धेरै टेक्निकलिटीहरू सामिल हुँदैनन्। कुनै पनि ब्लगको उद्देश्य तपाईंको ग्राहकहरूसँग राम्रो कुराकानी गर्न राम्रो र प्रभावकारी तरीका सिर्जना गर्नु हो। ब्लग यो संचार हुनको लागि वाहन हो, राम्रो देखिने वेबसाइट राख्ने टेक्निकलिटी होइन।
पदोन्नतिहरू समावेश गर्नुहोस्
तपाईं ब्लगमा पदोन्नतिहरू राख्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यसको महिला दिवस भन्न गरौं, र तपाईं एक अनलाइन फैशन साइट छ। ब्लगमा, तपाईं एक freebie रूपमा एक प्रस्ताव समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाई भन्न सक्नुहुनेछ "तपाईको महिलालाई आफूसितै लिएर आऊ, र तपाईले सित्तैमा क्रप टिप पाउनुहुनेछ"। त्यहाँ धेरै अधिक विधिहरू छन् जुन तपाईं प्रचारमा आफ्ना ग्राहकहरूसँग संवाद गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी:
१. यसलाई ब्लग पोष्टमा प्रकाशित गर्नुहोस्। तपाईको ब्लग पोष्ट तपाईको कथाको विभिन्न पक्षहरु लाई व्याख्या गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो पोष्ट एक permatink मा प्रकाशित हुनेछ।
२. सोशल मिडियामा युआरएल साझा गर्नुहोस्। तपाईंको च्यानल प्रकाशित गर्न स्थानीय च्यानलहरूको लागि सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं लक्षित विज्ञापनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको शहरलाई दर्साउँछ। लि media्कइन र ट्विटर जस्ता सामाजिक मिडिया वेबसाइटहरू साझेदारी ट्रिगर गर्नका लागि राम्रो स्थान हुन सक्छ।
An. ईमेल पठाउनुहोस्। पदोन्नतिको बारेमा तपाइँका सदस्यहरूलाई सम्झाउनुहोस्। लि to्क पोस्ट गर्नका साथै यसको सामग्रीको सारांश पनि याद गर्नुहोस्।
Google. गुगल एडवर्ड्स अभियान सेट अप गर्नुहोस्। तपाईको इलाकामा कुनै खास चीजलाई लक्षित गर्ने तपाईले कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्री अप्टिमाइज गर्नुहोस् र ट्राफिक बग्नेछ।
जोसुकैले पनि कुनै पनि समयमा ब्लगिंग सुरू गर्न सक्दछ। राम्रो स्थापना भएका व्यवसायहरूले धेरै ब्लगहरू सेट अप गरेका छन् जुन तिनीहरूको कोठामा विभिन्न पक्षहरूसँग डिल गर्दछ। धेरै वेबसाइटहरूले एक ब्लगको उपयोगबाट स्वत: पाईलट मोडमा पनि फाइदा लिन सक्दछन्। ब्लग तपाइँको ग्राहकहरु संग निरन्तर संचार कायम गर्न को लागी एक राम्रो तरीका हुन सक्छ। यसले टिप्पणी र फोरमहरू जस्ता विभिन्न सुविधाहरू समावेश गर्दछ, जुन राम्रो ग्राहक सम्बन्धको आधार बन्छ।